Semalt Inoratidzira 3 Google Analytics Filters Kuti Uishandise
MuGoogle Analytics, mafiritsi anotipa shanduko yekuchinja uye kuchinja data uye kugadzirisa zvirongwa zveAtekiti maererano nezvinodiwa newebsite yedu. Iwe unogona kushandisa Google Analytics filter kuti uise kana kusabvisa data, kutumira mafaira kubva pane imwe platform kusvika kune imwe kuitira kuti inogadziriswa nenzira iri nani uye inozadzisa zvinodiwa zvebhizimisi rako.
Zvaunogadzirira mharidzo yako kunobva pakuti sei data iri kuongororwa mubhuku rako reGoogle Analytics. Nekubatsirwa kwezviputa, unogona kushandura nyore, kuchinja, kana kuchinja data - möbel einlagern winterthur. Nokudaro, Google Analytics inogona kushandisa mafaira kubva mufomu yakasvibiswa kuenda kune fomu yakabatana yewebsite yako. Nenzira iyi, kushandiswa kwedhesi kunova nyore uye kuri nyore, uye data yakanyatsorongeka inokupa iwe mhinduro dzakarurama pamusoro pemotokari inowanikwa pawebsite yako.
Oliver King, Mutengi weMuteresi weChechi Semalt , anotsanangura pano pamarudzi matatu makuru ema filters ayo ose webmasters anoshandisa muGoogle Analytics account: spambot filters, mukati maIndaneti kusabviswa, uye kumanikidzira kutumira mazita kana mapeji ekudzika.
Zvitsva zvinoshandiswa zve spambot zviri nyore kushandisa uye kupa zvakawanda zvekusarudza kubva. Iwe unogona kugadzirisa zvirongwa zvavo kubva paZviona Zvisarudzo Zvako muGoogle Analytics account. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuenda kune dashboard uye tarisa yeBot Filters sarudzo..Dzvanya iyi sarudzo uye itaire, iitevere nekuvhara mahwindo. Nezvo sarudzo, zviri nyore kune ani zvake kugadzirisa mazita ezvitsva uye bots mumabhuku avo eGoogle Analytics. Isa ma filters kumapepanji akawanda sezvinobvira kuti uwane zvaunoda.
2. Bvisai Pose Pakati Pakombiyuta IP
Chinhu chechipiri iwe unofanirwa kubhadhara kune kubvisa mukati maIndaneti mazita. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuzarura gwaro rako reGoogle Analytics uye enda kuChikamu chekutonga. Pano iwe uchatora Sarudzo yeZviona, apo iwe unosarudza kusarudza Firiji kuti uite mavara akawanda. Ramba uchidaro kusvikira wanyora zviputa zvakakwana zvewebsite yako. Usati watanga kusika filtere, iwe unofanirwa kuva nechokwadi chekuti unoshandisa mafaira aripo kana uine. Nhanho inotevera ndeyokupa mazita akakodzera kune zvese zvinoshandiswa, uye sarudza pakati pezvinonzi predefined and custom filters. A predefined filter ndiyo template yemafuta anowanzoshandiswa, asi tsika yefaira inzira yekufananidza mafirita ako mumarudzi ose emamiriro ezvinhu. Kana wambosika nhamba yaidiwa yefodhi, danho rekupedzisira nderekuvimbisa. Google Analytics haina kupa chero sarudzo chero ipi zvayo nokuda kwekusimbisa mafirita, saka unofanira kuzviita uchishandisa imwe sarudzo.
3. Simbisa ma URL kuCheccase
Kumanikidzika URLs kunyorera pasi zvigumisiro zviri nani zvinogoneka. Iwe unogona kushandisa ma filters kuti uchenese data. Somuenzaniso, kana webhusaiti yako ichitaridza nhamba huru yepamapeji uye iwe usati waita SEO, ipapo kutumira spam kunogona kuvapo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kuva nemapeji ane mazasi URL asi pane ma URL akawandisa. Kana uchinge wakagadzirisa zvirongwa zvadzo kuti uende pasi, haufaniri kukanganwa kuongorora kuvimbiswa kwavo vasati vavhara firiji.